Manchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Xidiga David Alaba Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Xidiga David Alaba
Manchester United oo xiriir la sameysay wakiilka Xidiga David Alaba
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay xiriir la sameysay wakiilka daafaca Bayern Munich David Alaba iyadoo ay sii socdaan sheekooyinka ku saabsan ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria.
Alaba ayaa beeca xorta ah kaga tagi doona kooxda Bayern xagaagan, kooxo dhowr ah ayaa ku jira xiisaha daafacan doonaya inuu ku guuleysto horyaalkiisii ​​10-aad ee Bundesliga xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay ESNP, Real Madrid ayaa ugu cadcad 28 jirkaan, iyadoo kooxda Macalin Zinedine Zidane ay wajaheyso suurtogalnimada ah inay bedesho kabtanka kooxda Sergio Ramos .
Si kastaba ha noqotee, warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxo kale oo badan, oo ay ku jiraan Liverpool , Chelsea , Manchester City , Atletico Madrid , Barcelona iyo Paris Saint-Germain , ay sidoo kale la xiriireen.
United ayaa loo maleynayay inay ka baxday tartanka loogu jiro ciyaaryahanka reer Austrian, laakiin Red Devils ayaa sidoo kale la sheegay inay la xiriirtay wakiilka Alaba Pini Zahavi si ay ugala hadlaan suurtogalnimada uu ugu biirayo Old Trafford.
Tababaraha Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ayaa la rumeysan yahay inuu u cadeeyay inuu doonayo inuu la soo wareego daafac ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
Previous articleChelsea iyo Paris Saint-Germain oo weli isha ku heysa Gianluigi Donnarumma
Next articleWaa sidee Mustaqbalka xidiga argentina iyo Man city Sergio Aguero